France " Journey-Assist - Ilay firenena nitsidika indrindra!
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Frantsa
Ireo outlet sy boutiques an'i Frantsa
5 jona, 2019
Mihaona amiko! Frantsa! Ilay firenena nitsidika indrindra!
Tower Eiffel - karatra fitsidihan'i Frantsa
France dia iray amin'ireo firenena malaza indrindra amin'ny mpizahatany manerana izao tontolo izao. Sarotra ny mitady safidy mendrika azy raha resaka kolontsaina sy harena voajanahary. Ireo vahiny mitsidika ity firenena ity dia faly amin'ny tora-pasika ao amin'ny Côte d'Azur, ny Alps mahafinaritra, ny monasie medieval, ny katedraly Gothic, ny castles ao amin'ny Lohasahan'i Loire, ary koa Paris, izay ny ankamaroan'ny zazavavy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nanonofy hatramin'ny fahazazany.
Tsara - French Riviera
Tafiditra ao amin'ny Mont Saint Michel
Chambord Castle any amin'ny Lohasahan'i Loire
Inona no hatao any Frantsa
Frantsa dia manintona be dia be ho an'ny mpizahatany, izay hita amin'ny faritra rehetra, tanàna kely sy kely. Abbey momba. Mont Saint Michel (faritra avaratry ny firenena), dia ao amin'ny lohasahan'ny ony. Loire, tanànan'i Rouen (toerana namaranan'i Jeanne d'Arc ny fiainany), ny tanànan'i Strasbourg sy Lyon, Avignon sy Carcassonne, Marseille ary Toulouse, ilay trano mimanda ao amin'ny Isle of If, ny toeram-pialan-tsasatr'i Evian sy Vichy - ity dia ampahany kely fotsiny amin'ny zaridaina frantsay azonao zahana mandrakizay.
Rouen tanàna any Normandia, Frantsa
Ivontoerana ara-tantara ao Strasbourg, Frantsa
Lyon tanàna, Frantsa
Papal City - Avignon, Frantsa
Ny tanàna mahavariana karcassonne
Marseille tanàna, Frantsa
Bentena ao amin'ny Nosy If
Resort Vichy, Frantsa
Divay sy fitsangatsanganana gastronomic
Any amin'ny faritra Bordeaux, Alsace, Chablis, Loire ary Champagne dia mamokatra divay malaza eran'izao tontolo izao. Ao amin'ny tranom-bakoka misy ny divay sy ny fromazy dia afaka manandrana ireo vokatra ireo ianao.
Betsaka ny toeram-pialan-tsasatra mediteraneanina any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa - izany dia ny Cannes, Nice, Monte Carlo, Antibes. Any amin'ny faritra avaratra dia azonao atao ny mitsidika ireo trano fivahinianana malaza any Trouville sy Deauville, izay malaza amin'ny rano manasitrana sy lalana mahafinaritra amin'ny fandehanana eny akaikin'ny morontsiraka.
Beach any Cannes
Larvotto Beach any Monte Carlo
Torapasika any Antibes, France
Nanjary nalaza koa teo amin'ny mpizahatany ho any thalassotherapy i Frantsa, izay ampiasaina am-pahombiazana amin'ny ivon-toerana spaoro izay mifantoka amin'ny morontsiraka Atlantika, akaikin'ny Bay Biscay ary ny Channel English. Ireo dia trano fandraisam-bahiny toy ny Saint-Malo, Biaritz, La Baule ary Quiberon. Ny fitrandrahana plastika mafana indrindra dia atao any atsimon'i Frantsa (foon'ireo Pyrenees) ary any afovoan'ity firenena ity.
Hot Springs Auvergne, Frantsa
Loharano mafana ao amin'ny Pyrenees
Ny toetr'i Frantsa
Salan'ny rivotra mafana isam-bolana
Salanisan'ny rano antonony
Ny ankamaroan'ny faritany frantsay dia manana toetrandro marin-toetr'andro. Any amin'ny faritra atsinanana dia mifindra amin'ny karazan-tany kaontinantaly izy io, ary amin'ny morontsirak'i Mediterane dia misy karazan-toetr'andro subtropika. Ny vanin-taona mafana eto amin'ity firenena ity dia somary mahasosotra (manomboka amin'ny +20 ka hatramin'ny 25). Ny volana mety indrindra amin'ny fitsidihana any Paris dia ny septambra-oktobra sy mey, ary ny French Riviera dia septambra sy jona.
Amin'ny manodidina. Ny fahavaratra any Corsica dia maharitra ela - manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Ny tsara indrindra dia ny tonga eto amin'ny volana septambra-oktobra sy mey-jona.
Ao amin'ny Alps, ny oram-panala dia milatsaka amin'ny andro faran'ny volana novambra, ary miempo amin'ny faha-2 tamin'ny volana Mey. Ny toetrandro malemy kosa dia manome ny zava-misy fa na amin'ny ririnina aza, any amin'ireo lohasaha amin'ny haavony sahabo ho 1 m dia tsy mangatsiatsiaka -500. Ny fotoana tsara indrindra amin'ny fanaovana ski ao dia manomboka amin'ny faha-10 febroary. Amin'izao vanim-potoana izao izay milamina sy mazava ny toetrandro.
Paris amin'ny fahavaratra
Ririnina any Paris
Weather in France now + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Frantsa. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Fiantsenana any Frantsa
Any Frantsa, azo antoka fa mividy fromazy, divay, haute couture, kosmetika, souvenir ary fofona manitra.
Raha mihoatra ny halavan'ny fotoana malalaka ny habetsaky ny vola, dia asaina fa mijery ireo boutika mpanaingo hatsangana ao amin'ny Champs Elysees. Ny zavatra an'ny marika tanora dia somary kely kokoa. Azo jerena ao amin'ny distrikan'i Paris Marais izy ireo, ary koa eny an-dalana. Rivoli.
Ary raha tsy maniry ny hiakatra lavitra afa-tsy ny fahatongavan'ny fivarotana mankany amin'ny Eiffel Tower ianao dia tsara kokoa ny manokana andro iray manokana amin'ny fitsangatsanganana eny amin'ireo toeram-pivarotana. Izy ireo dia ivelan'ny fetran'ny tanàna ao Paris. Na izany aza, izy ireo dia manana tombony amin'ny fividianana entana amin'ny lafiny vidin'ny vidiny sy ny vidiny.
Ohatra, ny trano fanta-daza eran'i Frantsa, La Vallee Village, dia vondron-tanàna iray hita any akaikin'i Disneyland, izay manana fivarotana 120 trano, izay samy mivarotra ny marika azy manokana.
Outlet La Vallee Village ao anatiny
telefaonina: + 33 1 60 42 35 00
Ampianaro ny sarintany amin'ny fanamoriana.: https: //g.page/la_vallee_village_france?share
Usines Center Paris Nord Outlet
Ny fivoahana malaza iray hafa dia antsoina hoe Usines Center Paris Nord. Mivarotra vokatra amin'ny vidin'ny mpanamboatra izy ary eo akaikin'ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle.
Usines Center Paris Outlet Inside
Address: 134 Avenue de la Plaine de France, 95500 Gonesse, France
telefaonina: + 33 1 85 08 35 50
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/B6mWjEwDE7nCVofh6
Rehefa mivarotra any Frantsa
Fomba iray hafa mahomby hitsaboana vola ny fandehanana any Frantsa amin'ny fotoana fivarotana. Notazomina eto indroa isan-taona izy ireo manerana ny firenena. Ny tsirairay dia maharitra 5 herinandro. Amin'ny andro voalohan'ny varotra dia misy fihenam-bidy kely atolotra, saingy amin'ny farany mahatratra 70% izy ireo, na dia tery aza ny safidin'ny entana.
Namidy any Frantsa
Namidy any Frantsa 2020
Amin'ny 2020 dia hanomboka ny varotra 24 Jona 2020 amin'ny 8 maraina ary hitohy mandritra ny 4 herinandro, hatramin'ny talata 21 Jolay 2020.
Ny mampiavaka ny nahandro frantsay dia ny fahaizana manambatra tsara ny tsy mifanaraka ary mampiasa ny vokatra mety indrindra indrindra ho "material" gastronomic.
Amin'ny faritra rehetra any Frantsa dia afaka mahita lovia mety ahandroana any ianao any an-kafa.
Ka, any amin'ny faritr'i Rhône-Alpes, ohatra, dia manamboatra casserole tena tsara amin'ny voamadinika ovy "gratin dauphinouis", ary amin'ny afovoan'i Alpes - fondue. Buyabes, lasopy Marseille vita amin'ny karazan-trondro samihafa, izay niorim-paka tsara tany avaratry ny lanezy, dia salama tsara taorian'ny fanaovana ski lavitra.
Bouillabaisse - lasopy hazan-dranomasina Marseille
Any amin'ny trano fisakafoanana dia maharitra 12 ka hatramin'ny 15 ny vanim-potoana fisakafoanana ary ny ora fisakafoanana dia 19 ka hatramin'ny 23 mandritra ny fotoana sisa dia manafatra sakafo mangatsiaka mangatsiaka indrindra izy ireo.
Fanta-daza i Frantsa, tsy vitan'ny fahandroana sy fananganana lafo ihany. Betsaka ny bistros sy ny lovia varahina (kafe), crepes (pancake) ary ny trano fisakafoanana kely misy ny sakafo arabo sy sinoa. Tsy hisy ho noana. Amin'ny andrimpanjakana toy izany, ny sakafo feno ho an'ny olona iray dia vidiny 12-15 euros.
Ny kafe any Frantsa dia antsoina hoe Brasserie
Pancakes any Frantsa - creperie
Vidiny ny vidin'ny bar sy kafe any Frantsa
Ao amin'ny trano fisotroana sy trano fisotroana kafe eo akaikin'ny fidirana dia misy tabilao manokana izay matetika ny vidin'ny vidiny: "Au comptoir" (izany hoe eo amin'ny latabatra) ary "salle" (izany hoe eo amin'ny latabatra).
Ambonin'izany, ny voalohany dia mora vidy foana. Amin'ny mitatao vovonana dia mihena ny vidiny (amin'ireo orinasa ireo izay miasa amin'izao fotoana izao).
Ny tahiry dia azo tratrarina ihany koa amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny Menu du jour amin'ny menio. Ity dia sakafo atoandro napetraka, ary any amin'ireo orinasa frantsay, dia midika safidy 2 na 3 safidy ho an'ny lovia.
Divay any Frantsa
Harem-pirenena any Frantsa ny divay. Ny fivarotana divay dia afaka manampy anao hisafidy azy, fa ny fivarotana lehibe ihany koa dia manolotra karazany maro. Ny iray amin'ireo divay mena tsara indrindra dia ny Cabernet Savignon, ho an'ny fotsy dia anolorantsika an'i Monbazillak, ho an'ny divay rosé - Cabernet d'Anjou. Ny vidin'ny tavoahangy divay frantsay tsara dia manomboka amin'ny 10 euro. Brittany mirehareha cider mahafinaritra. Ny marika tsara indrindra azony dia Cornouaille (vidin'ny tavoahangy 0,5 litatra hatramin'ny 1 euro).
Divay fotsy - Monbazillak
Divay Rosé - Cabernet d'Anjou
Ilay cider Brittany malaza - Cornouaille
Kosmetika any Frantsa
Ny karazana kosmetika faran'izay betsaka indrindra dia atolotry ny tranombarotra Sephora, boutiques L'Occitane ao Provence, ary amin'ny Grasse dia azonao atao ny mividy kosmetika "tsy misy anarana" avo lenta, izay natao teto nandritra ny taonjato maro.
I Frantsa mihitsy no firenena hahitan'ny tsirairay ny tenany amin'izay tadiaviny 😉
Coat of arm of France
Fomba fitantanan'ny governemanta: Repoblika demokratika
Fiteny: Iraniana. frantsay.
Kaody finday: 33 +
Sehatra Internet: .fr